Date My Pet » Best Voalohany Date Tips for Men
Last nohavaozina: Nov. 30 2020 | 4 min namaky
Ny daty voalohany dia mety handrovitra ny nerve. Mety misy fanontaniana marobe efa tonga ao an-tsainy dieny izao. Ahoana ny fomba hitondrany ny tenany? Aiza no itondrany azy? Inona no tokony horesahiny? Mitonia, mahazatra fotsiny ny mahatsiaro maharary ny ahiahy mialoha ny daty voalohany. Tsy maninona izay mifamadika amin'izany, Ny fanaovana an'io daty io amin'ny alimanaka dia fahatanterahany. Ny sakana voalohany dia ao aorony ary afaka mifantoka amin'ny famoronana traikefa tsara indrindra izy roa.
Ny zavatra voalohany dia zavatra rehetra, indrindra fa ilay rangahy dia mitady ny mety ho vady maharitra. Na inona na inona fomba nahatongavany izany daty voalohany izany (fampiharana mampiaraka, ao am-pianarana, Samy namana, na inona na inona izany), misy torohevitra vitsivitsy tsy maintsy tadidiny mba hamoronana fahatsiarovana maharitra - ary terena izy hiteny hoe "eny" amin'ny daty faharoa.
Hamarino mialoha ny toerana misy ny daty
Raha miresaka aminy izy noho ny lahatsoratra, zava-dehibe ny miresaka aloha. Afaka nandefa resaka momba ny fialamboliny sy ny fahalianany izy ary hahalala hoe inona ny toerana misy azy voalohany. Ny zavatra farany tadiavin'ny andaniny roa dia ny ho tafangona amin'ny toerana tsy mahasosotra. Ny toe-javatra iray dia tia an'io fanapotehana ny mety ho mety ho mahafinaritra voalohany io. Mety ho tsara amin'ny sakafo hariva sy sarimihetsika izy, fa ny vehivavy betsaka amin'ireny andro ireny dia aleony zavatra somary mahaliana kokoa. Misy aza ny tantaran'ny daty mahafinaritra amin'ny fetra mitifitra! Ny zava-dehibe tokony hotsaroana dia ny fitadiavana hetsika iray izay samy mankamamy sy mamorona traikefa ara-pifamatorana.
Mipoitra ny fisehoana. Akanjo foana ny manintona. Tsy azo sorena loatra io. Tsy misy elanelana be noho ny vehivavy mahita ny fisehoany daty amin'ny toeram-pisakafoanana frantsay iray misongadina ao anaty lobaka sy paty.. Ny hatsarana anatiny ihany koa, mazava ho azy, fa zava-dehibe aminy ny hanehoana azy fa miahy azy amin'ny fitafiana izy. Io dia manondro fa manome lanja ny fotoanany sy ny orinasa. Ary raha mbola eo izy, tokony hataony antoka ihany koa ny hahatongavany tsara. Asio sakoroka ireto fanondrony, atambatra izany volo izany, ary fofona tsara.
Ho ara-potoana. Toa ny torohevitra ankapobeny izay azo ampiharina na aiza na aiza, fa tena marina eto. Tsy misy zavatra manivaiva kokoa noho ny fiodinana hatramin'ny daty ora iray tara ary taraina. Fantaro hoe aiza ny toerana misy azy mialoha ary alao amin'ny anjaranao ny kaoninao. Alefaso kely aloha raha azo atao. Tonga eo amin'ny 15 minitra manomboka amin'ny daty dia afaka manampy azy hanao fiomanana toy ny fijerena ny latabatra tonga lafatra. Ny fahatongavany ara-potoana dia mariky ny fahalalam-pomba koa. Ny vokatra ratsy indrindra azo atao dia ny mihevitra azy fa mijoro. Asehoy azy fa mbola tsy maty ny chivalry!
Milazà mpihaino tsara
Mametraha fanontaniana ary mihainoa tsara mba hahafantarany azy bebe kokoa. Ny daty voalohany dia ny fotoana tsara indrindra ahafahana mahafantatra azy. Tokony hanao izay rehetra azony atao izy mba hifantohany irery any. Midika izany fa manala ny telefaonany ary mitazona ny fifandraisana amin'ny maso. Tsia ary mitsiky ary avelao izy hahita azy fa henoina. Ny resaka ny tenany dia ny fomba fampahafantarana azy ny momba azy ary zava-dehibe ny mitandrina azy. Tsy manao izany fotsiny izy mba hahatadidy azy, manao ho an'ny tenany koa izy. Tsy maintsy tadiaviny ny antony manosika azy hamantatra raha mety aminy izany.
Mihazona resaka ifampiresahana
Ny mahay mifampiresaka tsara dia manintona foana. Tsy ny mihaino azy fotsiny no resahina, momba ny famoronana miverina sy tsy hay hadinoina ilay izy. Tokony hanomana lisitr'ireo fanontaniana mialoha izy hikirihana azy amin'ny fomba mahomby. Raha manana fironana hiteny tsy miteny tsara izy na somary mampalahelo azy, ity no fomba mety hialana amin'ireny lavaka be ireny. Tokony hofantariny koa ny zavatra iankinany mandritra ilay daty. Tsy ny vehivavy rehetra no mitovy ary ny tena ratsy indrindra tsy maintsy atao amin'ny ankapobeny. Ny vehivavy sasany dia aleony hitazona ny resaka sy ny haavon'ny sehatra manokana. Miresaka momba ny fianakaviana, namana, sy biby fiompy. Na filma sy mozika. Ny vehivavy sasany te-hanadino lalina. filozofia, kanto, ary ny zava-misy ankehitriny dia lohahevitra vitsivitsy hanamafisana ny resaka. Miezaha hitadidy ny fivavahana na ny politika.
Aza miresaka momba ny Exes
Aza manao fotsiny. Na dia zava-dehibe aza ny mianatra momba ny tantaran'ny mpifankatia, IZAY REHETRA hevitra ratsy raha mieritreritra amin'ny exes. Aza manontany tena momba ny tantarany. Mety hahatonga azy hivoaka ho hendry izy, mifehy, ary mety psychotic. Etsy ankilany, tsy tokony hampiala-javatra amin'ny fomba ahoana izy taloha no olona ratsy indrindra eto an-tany. Mampiseho izany fa tsy mandroso izy, ary tsy misy vehivavy ao amin'ny sainy marina maniry ny hidirany amin'ny olona tahaka an'io. Ataovy mahasosotra izany, ry zalahy!
Hajao ny fetran'ny tena
Tokony hitahiry fiadanam-pitiavana izy ary hahatakatra ny fototry ny fiheveran'ny vatana, ary inona ny hafatra tsy an-tery izay azony alefany tsy nahy. Raha daty sarimihetsika izany, tsy tokony hanandrana fikaiky ny tanana taloha izy. Matetika ny vehivavy dia mampiseho ny fahalianany amin'ny lehilahy amin'ny fikasihana ny sandriny na ny fifandraisana mifandray amin'ny vatana. Fantaro ny fihetseham-pony momba ny habaka manokana ary hajao ny heviny. Tsy misy na iray aza milaza hoe 'mampihomehy' raha tsy ho mora tohina sy grabby ato ho ato.
Manantitrantitra amin'ny fizarana ilay volavolan-dalàna
Ity angamba dia mety ho fandraisana andraikitra resabe, fa tokony hanantitrantitra foana ny fanapahana volavolan-dalàna izy. Iaraho midinika mialoha izany ary ampahafantaro azy an-kolaka fa nanantena izy fa handoa ny volany amin'ity volavolan-dalàna ity. Tadidio ry zalahy, Tsy mora ny manantena olona handoa ny tenany. Aza manao raharaha lehibe amin'izany, avelao izy hampahafantatra azy mialoha. Izany fomba, mandany fotoana miaraka aminy izy satria mahafinaritra ny mpiara-miasa aminy fa tsy satria mahatsapa izy fa adidy izany. Ny vehivavy izay manantena fa ny lehilahy dia handika ny volavolan-dalàna aloha, dia mirona na tsy misy fihetseham-po. Ity dia saina mena lehibe izay mila marihiny. Tsy mahazo sitraka aminy izy raha mandeha miaraka aminy, eo izy satria tiany.
Manàna nahataratara? Ity Ahoana no aoka ho fantany